VekuCanada Vanogona Iko Kubhuka Mu-Hotera PCR Kuedzwa muJamaica paKuderedzwa Mwero
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » VekuCanada Vanogona Iko Kubhuka Mu-Hotera PCR Kuedzwa muJamaica paKuderedzwa Mwero
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Jamaica Pre-Kuenda Kuyedzwa kwevafambi veCanada
Vanhu vekuCanada vanoenda kuJamaica vanozobatsirwa kubva kune zvinowanika uye zvisingadhuri zvekuongorora masevhisi ePCR vari kunzvimbo iyi nekuda kwekuenderera mberi kwekuedza kukwezva kweJamaica Tourist Board (JTB). Vakuru veJamaican vakabatana nemarabhoritari maviri akazvimirira pachitsuwa ichi kuti vape vagari vekuCanada vanodzokera kumba mukana wekupinda muhotera PCR bvunzo nemutengo wakaderedzwa.
Vashanyi vekuCanada kuJamaica havazokwanisa kubhuka pre-kuenda COVID-19 bvunzo nekuderedzwa kunodarika makumi mashanu muzana mumutengo.
Vashanyi vanogara pahotera ine rezinesi muJamaica's Resilient Corridors nedzimwe nzvimbo dzekugara dzakatenderwa vanogona kuronga bvunzo dzePCR kuti dziitwe pachivakwa kuburikidza nesevhisi yevashandi.
Vafambisi vekufamba vanozokwanisa zvakare kubhuka PCR kuyedzwa vakamiririra vatengi vavo pamberi.
Kutanga Muvhuro, Gumiguru 25, vashanyi vekuCanada vanozokwanisa kubhuka zvavanoda vasati vasimuka COVID-19 molecular test zvakananga kuburikidza. Baywest Wellness Clinic uye Iyo kambani Technological Solutions Limited (TSL) ye75 USD (inosanganisira mutero), kuderedzwa kweanopfuura 50% kubva pamutengo wePCR wapfuura. Vashanyi vanofanirwa kuronga bvunzo yavo kuburikidza neyakatsaurirwa yepamhepo marabhoritari portal kuitira kuti vakwanise kuwana iyi yakasarudzika mwero.
Vashanyi vanogara pahotera ine rezinesi muJamaica's Resilient Corridors nedzimwe nzvimbo dzekugara dzakatenderwa vanogona kuronga bvunzo dzePCR kuti dziitwe pachivakwa kuburikidza nerubatsiro rweconcierge. Vashanyi vanogara mune yakazvimiririra villa, imba yevaenzi, kana yekugara vanogona kubhuka kugadzwa mu-munhu panzvimbo yepedyo yeBaywest kana TSL laboratory nzvimbo. Vafambisi vekufamba vanozokwanisa zvakare kubhuka PCR kuyedzwa vakamiririra vatengi vavo pamberi.
"Mutsva weJamaica muhotera PCR bvunzo uye yakaderedzwa mitengo ichave shanduko yemutambo Vafambi veCanada kushanyira kwainosvika,” akadaro Gurukota rezvekushanya kweJamaica, Hon. Edmund Bartlett. “Kuedza uku ndiko danho rekupedzisira mukuenderera mberi kwedu Jamaica CARE chirongwa, kuzvipira kwakazara kwekuenda-kwakafara kupa vafambi vese ruzivo rwakachengeteka uye rusina musono pavanenge vachishanyira chitsuwa chedu chakanaka. "
"Mwaka uri kuuya wekudonha nechando wakakosha kunharaunda yekushanya kweJamaica, uye JTB inodada nekutaurirana sarudzo dzekuyedza dzeCCIDID-19 dzevafambi vekuCanada pachitsuwa," akadaro Donovan White, Director weTourism, Jamaica. "Vese vatinoshanda navo muJamaica neCanada vanotenda zvikuru kuti vashanyi vari kunzvimbo iyi vanozowana mukana wekuongororwa PCR murunyararo rwehotera yavo nemutengo wakadzikiswa zvakanyanya."
Vanhu vekuCanada vanoenda kuJamaica vanogona kubhuka bvunzo dzePCR pamhepo vasati vasimuka kana vari munzvimbo yekuenda kuburikidza nemapuratifomu maviri akatsaurirwa ekuchengetera:
Iwo epamhepo mapuratifomu anotora ruzivo rwese rwunodiwa kuti upindezve muCanada, kusanganisira mazuva ekufamba uye nzvimbo yebvunzo. Kubhadhara kwesevhisi kuchagadziriswa pamhepo panguva yebhuki kuburikidza nekadhi rechikwereti. Mhinduro dzebvunzo kubva kuBaywest neTSL dzichatumirwa neemail zvakananga kune vatengi 24- kusvika 48-maawa zvichitevera kuunganidzwa kwemuenzaniso.
"JTB yanga ichishanda nesimba kuti ibatane nemarabhoritari emunyika akatenderwa kufambisa kuongororwa uye kusingadhure kune vashanyi vedu vekuCanada," akadaro Angella Bennett, Regional Director, Canada, Jamaica Tourist Board. "Tinofara zvikuru kuunza iyi sevhisi yakamirirwa kwenguva refu kumusika uye kuita kuti kuenda kuJamaica kunyanye kuve nyore kune vekuCanada munguva ino yechando."
Sekureva kweCanada yazvino-yekupindazve nzira yekufambisa, vese vafambi vane makore mashanu zvichikwira zvisinei nemamiriro ekudzivirira vanofanirwa kupa humbowo hweCOVID-19 yakashata mamorekuru bvunzo kuti vapinde munyika. Bvunzo dzinofanirwa kuitwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri enguva yavo yekusimuka nendege yakarongwa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Jamaica yazvino yekupinda maprotocol uye masevhisi ekuyedza evafambi veCanada, tinya pano.